जो सुन्दर भएकै कारण देश निकालामा परे !
काठमाण्डौं , २६ असोज । ओमार बोरकान अल गाला अर्थात विश्वका सुन्दर युवा । जो, सुन्दरताकै कारण देश निकालामा परे । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यी साउदीका २७ वर्षीय अभिनेता, मोडलले ..
‘मिस ज्यापू पेजेण्ट’ को तेस्रो संस्करण आयोजना
काठमाडौँ, २४ असोज । नाफा मण्डलले ज्यापू दिवसको अवसर पारेर यही कात्तिक २५ गते ‘मिस ज्यापू पेजेण्ट’ को तेस्रो संस्करण काठमाडौँमा आयोजना गर्ने भएको छ । ज्यापू समुदायका वेशभूषा, संस्कृति ..
सलोन बस्नेत संग एविसी अपविट कुराकानी
‘उकाली ओराली’ गीति एल्बम बजारमा
काठमाडौँ, ६ असोज । गीतकार ईश्वर श्रेष्ठको ‘उकाली ओराली’ गीति एल्बम बजारमा आएको छ । गायक रामकृष्ण ढकाल, राजेश पायल राई, स्वरुपराज आचार्यलगायत नौजनाले स्वर दिनुभएको उक्त एल्बममा देशभक्ति, लोक, आधुनिक ..
को होला मिस पोखरा ?
कस्तो होला त शेर्पा भाषाको पहिलो चलचित्र
काठमाण्डौं , १ अुसोज । आफनो भाषा संस्कृतिको संरक्ष्ँण र सम्वर्दनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको शेर्पा भाषाको पहिलो चलचित्र प्रदर्शन हुने भएको छ । शेर्पा म्युजिक वल्र्डको पहिलो ..
मन्डला थ्रिएटरमा नाटक ‘लाटीको छोरो’ प्रदर्शन हुदै
काठमाडौँ, २९ भदौ । समाजमा अहिले पनि आवाजविहीनहरुको जीवन सुरक्षित छैन । समाजमा न्यायको ठेक्का लिएका नेता, शिक्षित, हुनेखाने र धर्मको मर्म बेचेर खाने अधर्मीको कमी छैन । विकास, उन्नति र ..
काठमाडौँ, २८ भदौ । त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका लागि भर्ना भएका वृद्धवृद्धाको सहयोगार्थ एकल चित्रकला प्रदर्शन गरिएको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाको उपचारमा सहयोग ..
काठमाण्डौं , २८ भदौ । ‘छैटौ नेपाल–अफ्रिका फिल्म फेस्टिबल–२०१७’ आगामी असोजमा हुने भएको छ । ‘कलेज अफ जनालिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन’ (सिजेएमसी)को आयोजनामा असोज २ गतेदेखि ४ गतेसम्म फेस्टिवल हुने ..
रक मनपराउने युवापुस्ताले रोजे भजन गीत
काठमाडौ । नेपालको पहिलो अध्यात्मीक व्याण्ड सत्यकृतले पशुपति शर्माको आवाजमा नयाँ भजन बजारमा ल्याएको छ । संगीत मार्फत ईश्वरीय दिव्य प्रेमको सन्देश दिने उद्देश्यले सत्यकृत व्याण्डले सत्य सत्य मिलेर नदी ..
पलको बुटेलमा आस्मा सरर… (भिडियो)
काठमाडौं, १८ साउन । ‘कार्टुन्ज क्रु’ लाई फिचरिङ गरिएको नयाँ गीत ‘जता जता पिरतीको बाटो….’ सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत गीतको भिडियोलाई मंगलबार दिउँसो २ बजे सार्वजनिक गरिएको ..
काठमाडौं, १० साउन । मिस एयर होस्टेस २०१७ चौथो संसकरणका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ । सिजन मिडियाले विगत ७ वर्ष देखि आयोजना गर्दै आएको होस्टेस २०१७ चौथो संसकरणका ..